နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ချိုချို၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်နှင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက် | Myanmar President Office
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ချိုချို၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ ခရစ္စမတ်ပွဲတော်နှင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ချိုချို၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည် ယနေ့ညနေ ၅ နာရီတွင် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီ ဗန်ထီးယူ၏ နေအိမ်၌ကျင်းပသည့် ခရစ္စမတ်ပွဲတော်နှင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းခြင်း အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ကြသည်။
အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ချိုချို၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်း ဦးထင်ကျော်နှင့်ဇနီး ဒေါ်စုစုလွင်၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ရင်မေ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်း နှင့်ဇနီး နန့်ကြင်ကြည်၊ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ဦးထွန်းထွန်းဦး၊ နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးညွန့်၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှသိန်းနှင့်ဇနီး ဒေါ်အေးသီတာ၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ၊ ပြည်ထောင်စုရှေ့နေချုပ်၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံ အမျိုးသားလူ့အခွင့်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ၊ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများ၊ နိုင်ငံတော်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာခုံရုံးအဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်တို့မှ ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများ၊ တိုင်းဒေသကြီး နှင့်ပြည်နယ် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌများ၊ ဒုတိယဝန်ကြီးများ၊ ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ၊ နေပြည်တော်ကောင်စီဝင်များ၊ သိက္ခာတော်ရ ဆရာတော်များ၊ ဘာသာပေါင်းစုံ ညီညွတ်ရေးအသင်းမှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ၊ ပြည်တွင်းအစိုးရ မဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ အထူးဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များနှင့် ၎င်းတို့၏ဇနီးများကို ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူနှင့်ဇနီး ဒေါက်တာ ရွှေလွှမ်း တို့က ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်ကြသည်။
အခမ်းအနားကို Christmas Short Video ပြသဖွင့်လှစ်ပြီး ဒုတိယသမ္မတ၏ဇနီး ဒေါက်တာရွှေလွှမ်းနှင့် အဖွဲ့က Hark The Herald နားထောင်ကောင်းကင်သား ကြွေးကြော် သီချင်းနှင့် Silent Night တိတ်ဆိတ်ည သန့်ရှင်းညကျူး သီချင်းတို့ဖြင့် ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းကြကာ Rev. Dr. J. Ral Buai က ခရစ္စမတ် အဖွင့်ဆုမွန်ကောင်းတောင်းသည်။
ထို့နောက် ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူက ခရစ္စမတ် ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ ဆရာစံပီးက ခရစ္စမတ်ဓမ္မတေး အထူးသီချင်း သီဆို၍ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က မွေးနေ့တော် နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားပြီး ဆုမွန်ကောင်းတောင်းသည်။
ယင်းနောက် Jesse Van Bawi နှင့် Joseph Van Thio တို့က ခရစ္စမတ် တေးသီချင်း သီဆို၍ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က မွေးနေ့တော် နှုတ်ခွန်းဆက်စကားပြောကြားပြီး ဆုမွန်ကောင်းတောင်းသည်။
ဆက်လက်၍ ထန်တလန်လူငယ်အဖွဲ့က ဓမ္မတေးသီချင်း သီဆို၍ ဂုဏ်တော် ချီးမွမ်းကြသည်။
ယင်းနောက် သိက္ခာတော်ရဆရာကြီး ဒေါက်တာ တင်မောင်ထွန်းက ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများနှင့် နိုင်ငံအကြီးအကဲများအတွက် အထူးဆုတောင်း မေတ္တာပို့သသည်။
ထို့နောက် ချင်းတိုင်းရင်းသူ ဆရာမ Man Zen Niiang က မြန်မာ့ရိုးရာအကဖြင့် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပြီး ဘာသာပေါင်းစုံချစ်ကြည်ညီညွတ်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးသောင်းထိုက်က ခရစ္စမတ် နှုတ်ခွန်းဆက်စကား ပြောကြားကာ Jennifer Ngun Sui Par က ခရစ္စမတ်ဓမ္မတေး အထူးသီချင်း သီဆို၍ ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းသည်။
ယင်းနောက် သာသနာပိုင်ချုပ်ကြီး စတီဗင်သန်းမြင့်ဦးက ခရစ္စမတ် တရားဒေသနာ ဟောကြားပြီး သိက္ခာတော်ရဆရာတော် ဒေါက်တာအေးမင်းက အစားအသောက်များအတွက် ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းသည်။
ဆက်လက်၍ တေးသံရှင် စောဖိုးခွားနှင့်အဖွဲ့က မြန်မာပြည်ကိုချစ်ပါ အထူးသီချင်းဖြင့် သီဆိုဖျော်ဖြေသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်း ဦးထင်ကျော်၏ ဇနီး ဒေါ်စုစုလွင်၊ ဒုတိယသမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ၏ဇနီး ဒေါက်တာရွှေလွှမ်း၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်၏ဇနီး ဒေါ်ရင်မေနှင့် အဖွဲ့က ခရစ္စမတ် ဓမ္မတေးသီချင်းကို သီဆို၍ ဂုဏ်တော် ချီးမွမ်းကြသည်။
ထို့နောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့်ဇနီး ဒေါ်ချိုချို၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည် ခရစ္စမတ် အထိမ်းအမှတ်ကိတ်ကို အတူတကွ လှီးဖြတ်ပေးကြသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတဟောင်း ဦးထင်ကျော်၊ ဒုတိယသမ္မတများ ဖြစ်ကြသည့် ဦးမြင့်ဆွေနှင့် ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူ၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတီခွန်မြတ်နှင့် အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ မန်းဝင်းခိုင်သန်းတို့က ဦးဆောင်၍ ခရစ္စမတ် အထိမ်းအမှတ် ဖယောင်းတိုင်များကို မီးထွန်းညှိပေးကြသည်။
ထို့နောက် ရန်ကုန်ကက်သလစ်ဂိုဏ်းချုပ်သာသနာ လက်ထောက်ဆရာတော်ကြီး Rev. John Saw Yaw Han က ခရစ္စမတ် အထူးဆုတောင်း၍ ကောင်းချီးပေးသည်။
ယင်းနောက် နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်ဇနီး၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့သည် အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် ဧည့်သည်တော်များနှင့်အတူ ခရစ်တော်မွေးနေ့ မိတ်သဟာယညစာကို အတူတကွသုံးဆောင်ကြသည်။
ညစာသုံးဆောင်နေစဉ် နိုင်ငံကျော် တေးသံရှင်များက ခရစ္စမတ်တေးသီချင်းများ ဖြင့် သီဆိုဖျော်ဖြေကြသည်။